प्रश्न जहाज ...
2 वर्ष 1 महिना पहिले #197 by PAYSON
निश्चित एक वा दुई WWII विमान वाहक हेर्न चाहन्छु।
2 वर्ष 1 महिना पहिले #198 by Gh0stRider203
फेरि त्यो एक खराब विचार मानिसको थाहा!
2 वर्ष 1 महिना पहिले #202 by PAYSON
के प्रेम होइन? म सही छु? 1 वा2WWII वाहक बेडे। मलाई गलत लिन छैन, म अब हामी छ को डेक मा slammin 'प्रेम, तर यो नवीनतम CORSAIR (पनि एक WWII विमान हुनत, यो नै वाहक प्रयोग) संग एक सानो पनि ईजी छ। वाहक विमानहरु मा नवीनतम एक goooody छ। पाठ्यक्रम, सबै Grumman बिरालोहरु मेरो हृदयमा विशेष स्थान पकड। म सिर्फ यो स्थापना गर्न कसरी बाहिर आंकडा गर्न सक्दैन, एक bitchin 'WWII समतल शीर्ष हुन जस्तो देखिन्छ के को एक fsx संस्करण छ। यो नै स्थापना Rikooo छ छैन। चलाउन पायो, (शाब्दिक, केही joggin 'गर्न पायो)
फिर्ता बादल, PAYSON गर्न
2 वर्ष 1 महिना पहिले #207 by Gh0stRider203
म थप सहमत सकेन। सधैं प्रयास र कुराहरू राख्न सकेसम्म प्रामाणिक गर्न मजा
म इमानदार कुनै संकेत कसरी मलाई अगाडि फाइल बिना कि छिटो स्थापना गर्न हुनेछ। म मात्र के तपाईं दृश्यहरु फोल्डरमा यो स्थापना भनेर मान्छु गर्न सक्नुहुन्छ, र स्वतः FSX थपियो होईन भने, त्यसपछि यसलाई मा स्वयं थप्न ...